बलिउडकि बहादुर अभिनेत्री कंगनालाई लाग्यो फेरि अर्को यस्तो आरोप! – PathivaraOnline
Home > बलिउड > बलिउडकि बहादुर अभिनेत्री कंगनालाई लाग्यो फेरि अर्को यस्तो आरोप!
admin September 29, 2020 September 29, 2020 बलिउड	0
एजेन्सी । कंगनामाथि बलिउड गायिका सोना महापात्राले ट्विट गर्दै उनी आफ्नो बाहेक अरूको पक्षमा नउभ्भिने र नबोल्ने स्वार्थी भएको बताएकी छन् । योसँगै सोनाले बलिउडका केही नराम्रा प्रवृत्तिमा आवाज बुलन्द गरेकोमा कंगनालाई बहादुर भन्न सकिने बताएकी छन् । कंगना आफ्नोलागी बाहेक अरू कसैकालागी उभिएकी छैनन् । उनले आफ्नो सरहाना गर्ने मानिसलाई पनि कहिले याद गरेकी छैनन् ।
यो कुनै परिवर्तन चाहने वा कुनै पनि विचार बोक्ने नेताको लायक पनि होइन । हो, उद्योगमा जारी केही नराम्रा प्रवृत्तिको विरूद्ध आवाज उठाउन उनी एकदमै बहादुर छिन् । सोनाले ट्विट गरेकी छन् । जब कसैले अनुष्का शर्मा र बाँकी मानिसका बारेमा पोस्ट सेयर गरेका थिए। म यही भन्छु की कंगना रनौत कृपया केही नारीवादी साथीहरू बनाउनुहोस् र केही राम्रा सल्लाहकार राख्नुहोस्, अगाडि ट्विटमा उनले लेखेकी छन् ।
यसैगरी सोनाले कंगनालाई पीडित महिलाका रूपमा पेस नहुन भन्दै व्यंग्य गरेकी छन् । कंगनाले सोनालाई ट्विटरमा ब्लक गरेकी छन्। यसको जानकारी पनि सोनाले ट्विटमा दिएकी छन् । मैले कहिले उनलाई फलो गरेको थिइन तर आज यसबारेमा मलाई थाहा भएको छ। कंगना हरकोहीको आलोचना गर्न चाहन्छिन् । तर के उनी दुनियाँ आपसी परस्परतामा काम गर्छ भनेर जान्दिनन्रु उनले यो यी सबै चीजको सामना कसरी गर्ने भनेर जान्नुपर्छ । ट्विटमा उनले भनेकी छन् ।
बढिमा ५ लिटर घरेलु र’क्सी र १० लिटरसम्म जाँ’ड बनाउन
काठमाडौं सर्वोच्च अदा’लतले बढिमा ५ लिटर घ’रेलु र’क्सी र १० लिटरसम्म जाँ’ड बनाउन दिन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले वर्षमा ६ पल्टभन्दा बढी जाँ’डर’क्सी पार्न नदिन भनेको छ। न्या’याधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इ’जलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अ’सरलाई ध्यानमा राखी जाँ’डर’क्सीको सीमा तोकिदिएको हो।
यस विषयमा अनुगमन, नि’यमन र नि’यन्त्रणका लागि मौ’जुदा का’नुनमा क’डाइ गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ। गत माघमा भएको फै”सलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख छ।
‘एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रxक्सी र दस लिटरसम्म जाँ’ड वर्षमा ६ पटक पाउने भनी का’नुनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नै सूचनादाताहरूले उत्पादन गरे÷नगरेको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘इ’जाजत’पत्रवालाले प्रत्येक बो’तलमा अ’न्तशुल्क टिकट टाँ’सेको म’दिरा मात्र बिक्री गरेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनु’गमन गरी कानुनको का’र्यान्वयनलाई प्र’भावकारी बनाउनू।’
०७७ साल असोज १४ गते इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर ३० तारिख बुधबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
अभिनेत्री कैट्रिना कैफको यो भिडियो एकाएक भाइरल भएपछि… हेर्नुस्